kabarmakyay: November 2013
ကမ္ဘာမကြေ “မဲဆွယ်ခြင်း” သို့မဟုတ် မြန်မာပြည်တောင်ဖက်စွန်းက အလွမ်းကဗျာ
ယခုတလော လက်ဆင့်ကမ်း အီးမေးလ်ဖြန့်ဝေမှုတွင် အမျိုးသားရေးတာဝန် တရပ်အဖြစ် တတပ်တအား ဆင့်ကမ်းနေသော အကြောင်းအရာတရပ်ရှိပါသည်။
ဒါကတော့ New7Wonders အဖွဲ့ က ကမ္ဘာ့ အံ့ဖွယ် (၇) သွယ်စာရင်းကို ထပ်မံ ရွေးချယ် သတ်မှတ်ဖို့ Internet မှ ဆန္ဒမဲများ တောင်းခံနေရာမြန်မာပြည်မှ သဘာဝ ရတနာဖြစ်သော “မြိတ်ကျွန်းစု - Mergui Archipelago” သည် Final Nominees (၂၆၁) နေရာ စာရင်းတွင်ပါဝင်နေသဖြင့်
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၇) ရက်နေ့ အထိ မဲပေးခွင့် ရမည်ဖြစ်သည့်ဒုတိယအဆင့် ၇၇နေရာ တက်လှမ်းနိုင်ရေး ပါဝင်မဲပေးကြဖို့ရန်တိုက်တွန်းသည့် “အခုပဲ မြိတ်ကျွန်းစုလေးတွေကို Vote ပေးကြမလား ခင်ဗျာ။ ။ ” ဟု ပါရှိသော မောင်ရဲခေါင် (စီလီကွန် လွင်ပြင်) ရဲ့ဆောင်းပါးဖြန့်ဝေတာပါ။
ကျနော့အနေနှင့်လည်း ထိုဒေသ အကြောင်း မြိတ်ကျွန်းစု ဟုပြောလျှင် တွဲပါမြဲဖြစ်သည့် ဆလုံလူမျိုးစုနှင့်အတူ တကြိမ်လျှင် ၆လ ၁နှစ် ပင်လယ်ထဲက ကျွန်းများတွင် လည့်လည်သွားလာနေထိုင်ခဲ့ဖူးသဖြင့်
ကိုယ့်တိုင်းပြည်က နေရာမို့ဆိုတာထက် ပိုမိုတဲ့လေးနက်မှုနဲ့ လိပ်ပြာသန့်သန့် မဲပေးနိုင်အောင် အခြားလူမျိုးတွေ ရေးထားတဲ့ အင်တာနက်ပေါ်က
(World’s Last Archipelago) မြိတ်ကျွန်းစုသည် လူသားတို့ မနှောင့်ယှက်သေးဘဲ သဘာဝအရင်း မူလအတိုင်း ကျန်နေသည့် ကမ္ဘာ့ နောက်ဆုံး ကျွန်းစု ၊ မြိတ်ကျွန်းစု၌ အခြားနေရာတွေမှာ မတွေ့နိုင်တဲ့ ရေသတ္တဝါ မျိုးစိတ်တွေကို စုံလင်အောင် တွေ့ နိုင်ခြင်း မြိတ်ကျွန်းစု ငါးမန်း မျိုးစုံ တို့သည် ယဉ်ကျေးပျူငှာစွာဖြင့် လူကိုမကိုက်တတ်သောကြောင့် ကမ္ဘာ့ ရေငုပ်သမား တို့၏ အမြင့်ဆုံး အိပ်မက်ဖြစ်သော ငါးမန်းများ နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ ဆုံ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ယူခြင်း (Shark Encounter) ကို မြိတ်ကျွန်းစုမှာ ပြုလုပ်နိုင်ပြီ ဆိုတာတွေအပြင်
မြိတ်ကျွန်းစုရဲ့ ရေပေါ်ရေအောက် အံ့ဖွယ်ထူးခြားသည့်အလှအပများသဘာဝသယံဇာတများ လူတို့တွေ့ခဲသည့် သက်ရှိသတ္တ၀ါများ ဖိုမ မျိုးမစပ်ဘဲ ရာသီစက်ဝန်း အချိန်ဇယားနှင့် ရေမှပေါက်ဖွားလာပြီး ရက်ကာလ သက်တန်းအကုန်တွင် ရေပလုံစီဘ၀ ပြန်ရောက်သွားသော အဏ္ဍ၀ါ သန္တေတဇ များ သဘောင်္ာသားတွေစိတ်ကူးယဉ်သလို မိန်းမလှတပိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့ ရေသူမ လို့ခေါ်တဲ့ Mermaid နို့တိုက်သတ္တ၀ါ တကယ်ရှိတဲ့နေရာ ခက်ထန်ကြမ်းထမ်းတဲ့ ပင်လယ်ပြင်ထဲက ဒေသနေကျွန်းသားတို့၏ ကျွန်းမြေပေါ်မှာ သဘာဝကိုအံတုနေထိုင်မှု အသက်မွေး ၀မ်းကြောင်းအလုပ်အကိုင် ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်း စိတ်နေသဘောထား စသည်တို့ကို တစေ့တစောင်းမြင်နိုင်အောင်ဖေါက်သည်ချရင်း မြိတ်ကျွန်းစု ကိုမဲပေးကြပါလို့ မဲဆွယ်လိုက်ပါကြောင်း။
မြိတ်ကျွန်းစုသည် မြိတ်မြို့မြောက်ဖက် ထားဝယ်ဒေသ လောင်းလုံဘုတ် အဆုံးမှတောင်ဖက်တွင် ထိုင်းရေပိုင်နက်အစွန်း (an imaginary line divides Thai waters )စူရင်ကျွန်းများ(Surin Islands)မြောက်ဖက်အထိ စတုရန်းမိုင် ၁၄၀၀၀(36,000 sp km)အကျယ်အ၀န်းရှိပြီး နံမယ်ပေး ထားသောကျွန်းပေါင်း ၈၀၀ ရှိ၍ကျွန်းသိမ် ကျွန်းငယ်များပါရေတွက်လျှင် ကျွန်းပေါင်း၂၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။လူနေရွာအများအပြားမှာ ရေချိုရရှိပြီး ရာသီလေဒဏ်ကို ကွယ်ကာနိုင်သည့် မြေအနေအထားရှိသော ကျွန်းများ တွင်တည်ရှိသည်။
ပင်လယ်သား(ကျွန်းသား)၇၀%ကျော်သည် ကျွန်းမှာမွေး၍ ကျွန်းမှာသေသည် ဘယ်မြို့ဘယ်နယ်မှမရောက်ဖူးသူများဖြစ်သည်။
ရေပေါ်ရေအောက် ထူးတွေသည့် သဘာဝအလှအပများ
လွမ်းမောဖွယ် ဂုဏ်ယူဖွယ် အောင့်မေ့ကြည်နှူးဖွယ်ရာများ ကွန့်မြူးရာဒေသ
အလှအပများသာမဟုတ် သဘာဝအကာအကွယ် ရေအောက်သဏ္ဍာကျောက်တန်းများ ကြောင့်
၂၀၀၄ ဆူနာမီမှာ စက်ဝန်းနှင့်ပိုနီးသော်လည်းပိုဝေး သောထိုင်းလောက်မနာခဲ့ရပါ။
ငါးခိုးလှေများသုံးသည့် “၀ါလတ်”ခေါ် ဆွဲပိုက်စနစ်ကြောင့်ရေအောက်ကြမ်းပြင်များ သဏ္ဍာကျောက်တန်းများ ငါးသေး ငါးငယ် ခရုဂဏန်း မြွေမြော့ကစ၍ မလိုအပ်သော သတ္တ၀ါများပါပျက်စီးဆုံးရှုံးရသည်။
မြန်မာ့ရေပိုင်နက်အတွင်း ၀င်ရောက်ပြီး တရားမ၀င်ငါး(ခိုး)ဖမ်းသည့်လှေများ ထိုင်းနိုင်ငံ စဖန်ပလာ ဆိပ်ကမ်းတွင် ငါးလာရောင်းနေစဉ်။
စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ငါးဖမ်းမှုများကြောင့် ရေအောက်ကြမ်းပြင်များ ရေသတ္တ၀ါများ၏
အနာဂါတ်ကို ဖျက်ဆီးမည့်အရေး မသေးသော ပြဿနာဖြစ်သည်။
မြိတ်ကျွန်းစု၏ နန်းမတော် မြိတ်မြို့
ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ခေတ် အနော်ရထာမင်း လက်ထက်ကစတင်တည်ရှိလာသောဆိပ်ကမ်းမြို့
ဖြစ်ပြီး နောင်တွင်လည်း ဥရောပသားကုန်သည်တို့၏ ကုန်စည်ကူးသန်းရာ ဗဟိုကုန်သွယ်စခန်းတခု ဖြစ်လာသည်။
ပုံတွင်မြင်ရသော စေတီတော်ရှိရာတောင်သည် မြိတ်သမိုင်းချယ်သရာ နေရာဌာနတခုလည်းဖြစ်သည်။
ထိုင်းဒဏ္ဍာရီလာ မိထွေးတော်မိဖုရားက အကောက်ညဏ်ဆင်ကာ စေလွတ်လိုက်သဖြင့် နေပြည်တော်မှပူရိယက္ခတိုင်း (ယ္ခုပုလောမြို့တည်ရာ)သို့အသွား ထိုတောင်တွင်မြင်းကိုချည်၍ တထောက်နားညအိပ်စဉ် အနီးရှိ (ယ္ခု ပထော်ပထက်)တောင်ညီနောင်တွင် ဆေးကျိတ်နေသော
၀ိဇ္ဖာက မင်းသားလေးဆီက ချိတ်ပိတ်စာပါ “စာယူလာသူမင်းသားအား သုတ်သင်ပါဟုရေးသည်ကို နန်းတင်ပါဟု ပြင်ရေးပေးခဲ့သည့် ဇတ်လမ်း ရှိသောတောင်။ ထိုင်းဘာသာဖြင့် မာ=မြင်း ရိတ်=ချည်တိုင် မာရိတ်မှကာလရွေ့လျောလာကာ မြိတ် ဖြစ်ခဲ့သည့် မြို့သမိုင်းပုံပြင် ကြားဖူးပါသည်။
အိန္ဒယတွင်အလုပ်လုပ်ရာမှ ခွင့်ပြန်လာသူ ပေါ်တူဂီလူမျိုးစာရေးလေးက သင်္ဘောပေါ်ပါလာသော အရှေ့
အိန္ဒယကုမ္ပဏီသူဌေးသမီးမေရီပိုဗေးနှင့် မေတ္တာသက်ဝင် ချစ်ကြင်မိရာမှ ဂုဏ်တံတိုင်းကာခြားတဲ့ချစ်သူကို ပေါင်းဖက်နိုင်ရေးအတွက် သူစီးလာတဲ့သင်္ဘောကို အပိုင်စီးလိုက်မိရာမှ မြိတ်ကိုအခြေပြုပီး အဲဒီပင်လယ်တခွင်
ကို မင်းမူ စိုးမိုးခဲ့တဲ့ ပေါ်တူဂီ ပင်လယ်ဓါးပြဗိုလ်ကြီး နေခဲ့ဖူးရာတောင်ကုန်း။
နယ်ချဲ့ကို စွမ်းစွမ်းတမံ ခုခံခဲ့တဲ့ မြိတ်မြို့ဝန် ဦးမြတ်လေးရဲ့ ဌာနချုပ်။
စာရေးဆရာမောရစ်ကောလစ် မြိတ်အရေးပိုင်ဘ၀နေထိုင်ရင်း သမိုင်းထဲပါ အထောက်အထားတွေထဲက မေရီပိုဗေးကို အနုပညာ အားဖြင့်ရှင်သန်စေ ခဲ့သောနေရာ။
ပြည်တွင်းစစ်ကာလ မိမိ၌တာဝန်ရှိသော ငွေတိုက်ကို ၀န်ထမ်းကောင်း ပီသစွာ ကာကွယ်ခဲ့သူ မြိတ်အရေးပိုင် ထိပ်တင်ဒွေး ကျဆုံးခဲ့သည့်နေရာ။ သိမ်ကြီးတောင်ဟုခေါ်သည်။
ပင်လယ်ပြင်ထဲကကျွန်း လေကွယ်လှိုင်းကွယ် နေရာရွေးချယ်ကာတည်ထားသည့်ရွာ။
များစွာသော ကျွန်းများ၏မြေကြီးမှာ အမြင့်ပိုင်းတွင်သာရှိသဖြင့် ကျောက်သားကျောက်ဆောင်များ ပေါ်
တွင်၎င်း ရေရောက်ရွံ့ပြင်ပေါ်တွင်၎င်း(ဒေသအခေါ် ကြပ်စင်)စင်ထိုးကာ အိမ်ဆောက်နေထိုင်ကြသည်။
(နေရာအခက်အခဲကြောင့် ခြုံ့ထားသောပုံများ ကို
ပထမပုံပါ လူတွေသွားနေသည့်လမ်း ကိုလည်း တကျပ်လုံးခန့်ကပြု ကပြိုင်သား အချဉ်လုံး ကိုကြိမ်နှင့် နှီးနှင့် တုတ်ကာ (စင်ထိုးထားသောလမ်း)တည်ထားသည်။
စရောက်ဖူးစကဆို ပင်လယ်သား ကလေးတွေ ခွေးတွေ ပြေးဆော့နေသောကြပ်စင်လမ်းများတွင် ကျနော်တို့ ဂံသားတသိုက် (မြန်မာပြည်မမှလာသူများကို ဒေသသားတို့က (ပုဂံသား)ဂံသားဟုခေါ်ပါသည်။)လေးဖက်မထောက်ရုံတမယ် အသွားခက်ပါသည်။
အမေရိကန် ရွေးကောက်ပွဲအကြို ကာလတွေတုံးက
ဟီလာရီကလင်တန် နိုင်လျှင်အမေရိကန်၏ ပထမဆုံးမိမ္မသမတ ။ အိုဘားမားဆို ပထမလူမဲ ။ နောက်တယောက်နိုင်တာတောင် ပထမအသက်အကြီးဆုံးကွ စသည်ဆူညံနေသော အနီးဆုံးမြို့နှင့်
ဒေသသုံး ပါစင်ဂျာစက်လှေ တညအိပ်ခရီး ပင်လယ်ကြီးထဲမှာ ကျွန်းသားတို့လက္ဘက်ရည်ဆိုင်က
အသံတွေကို တအံ့တသြောရှိလျှင် ပုံတွေထဲက တချို့ခေါင်မိုးမှာ ဆက်တလိုက်စလောင်းခွက်
(ကြုံလို့ကြွားလိုက်အုံးမယ် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အစိတ်လောက် ဆက်တလိုက်စလောင်း
ခေတ်မဟုတ်ခင် ရန်ကုန်မှာ မြန်မာ့ရုပ်သံ ကြံစီတုန်း ကျနော် ပင်လယ်ကျွန်းတွေမှာ ကမ္ဘာ့ ဖလားပွဲ
ကလပ်ပွဲများ ကြည့်ခဲ့ရဖူးပါသည်။ ထိုင်းက တီဗွီ ၀ယ်တာ ကျပ် ၃-၄ထောင် တိုင်ထောင်တာ ကာလာထိမ်း ဘုစတာ တပ်တာ ကကျပ် ၃-၄သောင်း ကုန်သည်။)
ဒီအကွက်မှာ ပထမပုံက ငါးလာရောင်းသောဆလုံမိသားတစုပါ အဲဒီလှေဟာ သူတို့အိမ်ပေါ့(နောက်ပိုင်းမှာ အကျယ်ဖေါ်ပြ ထားပါတယ်)
အောက်ပုံတွေက ဒေသတွင်း လုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်သူ ဦးတင်ငယ် နှင့် သူ့ထံငါး ပုဇွန်လာရောင်းသူများပါ။
ဒီမြိတ်ကျွန်းစုကရွာတွေမှာ လောကဓမ္မတာ ကြွယ်ဝချမ်းသာသူတွေ ခေတ်အဆက်ဆက် ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ အများစုဟာ ဘ၀ကိုအောက်ခြေသိမ်းက ရုန်းကန်လုပ်ကိုင်ရင်း ကြီးပွားလာသူများဖြစ်ကြပါတယ်။
ဘ၀ကိုလက်၂ဖက်နဲ့စခဲ့ရာက နယ်တ၀ှမ်းအချမ်းသာဆုံးစါရင်းဝင်ဖြစ်လာပီး တခေတ်တခါက နိုင်ငံတော် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန အကြံပေးအရာရှိအဆင့် တာဝန်ပေးခံခဲ့ရသူမျိုးအထိရှိဖူးပါတယ်။
ဒီနယ်ကသူဌေး သူကြွယ်အဆင့် အားလုံးနီးပါးဟာ အောက်သက်ကြေသူများပီပီ ပလွားခြင်းကင်ပါတယ်။
နှစ်၂၀ကျော်က နောင်ဂွမ်(ဦးဂွမ်)ဆိုတဲ့ ကွမ်းသီးခြံ လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဟာ အလှူ၊အစီးအဝေး၊တနယ်တ ကျေး သွားရတာမျိုးကလွဲယင် အင်္ကျီကျွတ်နဲ့ အမြဲတကုတ်ကုတ် အလုပ်လုပ်နေတာမို့ လူငယ်တွေက
“နောင်ဂွမ်ကလမ်းမှာ ရှပ်အင်္ကျီကတန်းမှာလို့ နောက်ပြောင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနယ်တ၀ှမ်းလုံးမှာလဲ
တယောက်ယောက်က အဆီအငေါ်မတည့်တာတခုခုလုပ်ရင် မင်းဥစ္စာနောင်ဂွမ်နဲရှပ်အင်္ကျီကျနေတာဘဲဟုပင်
အခုပုံက ဦးတင်ငယ်ဟာ ပင်လယ်ထွက်ပစ္စည်း နိုင်ငံခြားကိုပို့တဲ့လုပ်ငန်းများ ရေခဲစက် အအေးခန်းလုပ်ငန်း
တွေလုပ်ကိုင်နေသူ ဒေသခံ လုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဦးတင်ငယ် လှေပေါ်မှာတည်ခင်းဧည့်ခံသည့် ထမင်းဝိုင်း
လုပ်ငန်းခွင်ထဲက ကျွန်းသူလေးတွေ ပင်လယ်ရာသီကို သနပ်ခါး
ပါးပါးက အံတုနိုင်ကြောင်း သက်သေပြသည့်နှယ် အလှကြွယ်လျက်
(ထမီအောက်နားစုတ်နေတာမဟုတ် စကဒ်ဝတ်ထားတာ ဟွန်း..)
ဟဲဟဲ..အင်္ကျီဝတ်ထားလို့ လူမှားသွားလား
ရှားပါး အဖိုးတန်သည့် ပုလဲနက်။
ကလေးရော ခွေးရော သူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှအားလုံး
ကင်မရာအိပ်တလုံးပိုက်ပီး အဲလိုလှေမျိုးနဲ့ ကျနော်ပင်လယ်ထဲမှာ ၆လ-၁နှစ်နေခဲ့ဖူးသည်။
ကုန်ထုတ်နိုင်မှု ရာသီဥတု စသည့်တို့အရ တခါတရံ
သို့သော် ထိုရွာတွင်နေစဉ် တစုံတယောက်သေလျှင်
ထိုရွာနှင့်ကျွန်းကို အလောင်းနှင့်အတူ စွန့်ထားခဲ့လေသည်။
ဆလုံလူမျိုး ကျား/မ /ကလေး/ လူအို
သရေကြိုးတတ် သံစူးဖြင့် ပစ်ဖမ်း သည့်အခါဖမ်းသည်။
ကမ်းခြေတလျောက် ခရုကောက်နေသော ဆလုံမေပျို ၂ယောက်(ဟီးဟီး အရင်ကဆို အင်္ကျီဝတ်ဘူးဗျ)
အရင်ကဆို အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပို့ဘလဲတွင်သွားရောင်းသည်
ဒင်းကလေးအတွက် ရေထဲကငါးကို ဒိုင်ဗင်ထိုး၍
Interesting General Links about Mergui archipelago:
"MERGUI MYEIK ARCHIPELAGO MYANMAR - BURMA""The Mergui Archipelago Project"
A very interesting website full of resources about Mergui archipelago and the people living there. The MAP has printed several excellent books on the subject."Mergui Archipelago, Biodiversity project" by ECoSwiss Website, an interesting resource about biodiversity in Mergui archipelago."Burma Sea Gypsies Compendium" By MAJE Project, another very interesting resource about Mergui and its Sea Gypsies.
Posted by U NU OF BURMA at 11/22/2013 12:30:00 AM 1 comments Links to this post
A Socilaist elected in Capitalist America